Astaanta Giraanta “The Vesica Piscis” - Land Of Punt
Astaanta “The Vesica Piscis” oo noqonaysa laba giraan oo isku dhexjira oo badhtamaha ku samaynayso calaamad la baxday magaca “The Vesica Piscis”. Waa astaan qadiimiya oo ay isticmaali jireen quruumo hore oo wax ka yaqaanay sirta jeexida xisaabadka (The sacred geometry). “The Vesica Piscis” waxaa loola jeeda oo magaca sidata qaybta dhexe ee sawirmay marka laysku daro labada oo u ee kaata taswiir kaluun. “The Vesica Piscis” cilmi sirta ku jirta waxay tilmaamay oo utaagantahay dumarnimada iyo in dumarku yihiin warshada soo saarta bini’aadamka “vulva of the Goddess”.
“Astaanta The Vesica Piscis, waa laba giraan oo is weheliya dhinacakale marka loo dhigona looyaqaan “the Yoni”. Magaca “yoni” waa qaybta dhexe labada giraan sameeyan asliyana kasoo jeedo kitaabka Sanskrit loona yaqaan albaabka looga gudbo samada “divine passage”. Yoni waa astaanta dumarka ama nolosha ka dhexaysa labka & dhadiga. Waa astaan xidhiidhisa dibudhalasho “rebirth” nolol cusub, dibunoolansho, dibu’abuurid kuwaaso guud ahaan astaan isticmaalana ururada khuraafadlayaasha.”
Ku dhawaad bilowgii wakhtigii Kristanka intabadan sawir lagu matalayo Jesus ayeey dhexgalin jireen astaanta Vesica Piscis oo ay ulajeedan Jesus oo ku dhexnool uurkii hooyadii.
“The vesica piscis” waxay astaan muhiim ah u tahay oo iska leh maysooniyada. “The Vesica Pescis”, intabadan waxaad ugu imanay oo aad ku dhex arkay meela qurxinta ee dhismayaasha, kiniisada, xafiisyada ay leeyin qolyahan shadaanka caabuda iyo dadka caanka oo la dexgaliyo astaan dabadeed fagaarayaasha la sudho.
“Astaanta The vesica, waa calaamad ay freemasooniyadu ku xardhadaan dhismayaasha Masooniyiinta kuna xusayaan walaalahodi hore ee mabaadida ka midaysnayeen”
Guud astaanta Vesica waxaa lala xidhiidhiya dumarnimada sidaa awgeed waxaad ku arkaysaa astaantan dharka dumarka, cadarada iyo shirkada waaweyn ee gacansiga noocidoonaba ha ahaade.
astaanta giraanta astaanta gucci Iluminaatiga Ilumunati The Vesica Piscis ururada hadafka qarsoon leh